Indawo yokusabela yaseAraucaria - I-Airbnb
Indawo yokusabela yaseAraucaria
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLuiza Gabriela
ULuiza Gabriela yi-Superhost
Sifuna wena kunye nosapho / abahlobo bakho nibe namava amnandi ekubalekeni kwethu.
Indawo entle yokuhlaziya amandla akho, indawo enoxolo.
Akukho matheko kunye nomculo ongxolayo!
Ngamaxesha esikhukula, sinokubona ukuhamba okukhulu kweenqanawa ezidlulayo (izikhephe, iijethi, iikayak, iinqanawa zabalobi, phakathi kwezinye) njengoko indlu ibekwe kumjelo omkhulu wedama.
Indlu ifumaneka eRepresa Pinhal, eAlto Cedros.
Indawo ikhuseleke ngokugqithisileyo, ikhondom evaliweyo enezindlu ezisi-7.
Indlu ibiyelwe ngokupheleleyo.
Indawo yokusabela ibonelela:
-Igaraji egqunywe ukuya kuthi ga kwiimoto ezi-4.
- Indawo enebarbecue, itafile kunye nefriji eyongezelelweyo.
-Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo: i-cutlery, iipani, ifom, isitya, iketile yombane, impompo yombane, isitovu somthi (sibonelela ngeenkuni, ukusetyenziswa ngokuqaphela), ifriji, ifriji, isitovu segesi esine-oveni, iblender, ibhotile yegesi eyongezelelweyo.
-Igumbi lokuhlala elineTV kunye nebhedi yesofa.
-Ongeziweyo: iingxowa zenkunkuma, igrill, imatshisi, isibane esikhanyayo, isibane esingxamisekileyo, ikiti yoncedo lokuqala, ilaphu lesitya, isefu kunye nephepha langasese.
- 3 amagumbi okulala: 2 amagumbi okulala anebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokulala eli-1 elineebhedi ezimbini zomntu omnye + 1 umatrasi omnye owongezelelweyo. (Sibonelela ngemiqamelo ngekhava kunye noomatrasi ngephepha elingangeni manzi).
- Igumbi lokuhlambela eligcweleyo.
- Ibhalkhoni ejongene nedama enesix pack.
- Izinyuko ezidibanisa indlu kwi-boathouse, enika umtsalane okhethekileyo kakhulu kwindalo kunye nendledlana esecaleni kwedama.
Amanzi asuka kwiqula le-artesian elikumgangatho obalaseleyo.
- Iqulethe itanki.
- Phezulu sinendawo ebiyelweyo enombono omhle wedama.
- Iikayak ezi-3, i-buoy kunye nebhodi yokuzonwabisa. Iivesti ezikhoyo, eziyimfuneko.
- Umatshini wokuhlamba, imodeli yepakethi emithandathu.
- Izitulo zedekhi.
- Amagwegwe okuloba.
Ngena: iqoqo elingundoqo lenzeka ngokuthe ngqo kunye ne-hostess, kwindawo yakhe yokuhlala ephakathi kweRio dos Cedros, indawo leyo yenziwe ifumaneke kwangaphambili, kunye nendlela eya kwindawo yokusabela.
Malunga neekhilomitha ezi-5 ukusuka kwindawo yokusabela, uya kufumana iindawo zokutyela ezigqwesileyo, ezinje nge: Ess Haus kunye neLindnerhof, ezisisalathiso kwingingqi ngokutya okuqhelekileyo kweJamani kunye ne-Italian.
Ukongeza kwivenkile yokutya kunye nomboniso woluntu kunye neemveliso zamakholoni kunye nemisebenzi yezandla.
Umbuki zindwendwe ngu- Luiza Gabriela
Umamkeli-zindwendwe uyafumaneka ku-Whats App ukuphendula imibuzo yeendwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rio dos Cedros